Karaiba: Andron’ny Mpifankatia Izao; Tsapanao Ve Ny Fitiavana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2012 10:38 GMT
Ao an-tsainy sy ao am-pon'ny mpamahana bolongana Karaiba ny fitiavana androany; ity topi-maso vetivety hoentin'izy ireo mikasika ny fomba fankalazan'izao tontolo izao izany fitiavana izany – izay eo amin'ny tontolon'ny bilaogy – nivezivezy teny…
Mpamahana bolongana ampielezana Jamaikana Grasshopper Eyes The Potomac no mandray izany amin'ny fomba tsotra:
Andron'ny Mpifankatia. Na inona fandraisanao ny dikan'izany, ataoko ho andro hitiavako ny karazan-javatra rehetra izany. Andeha hanaraka ny ohabolan'ny ntaolo aho: OROKA–ataovy tsotra izany, vetivety. Arahabaiko hoe ‘Tratry ny Fitiavana!’ ‘ireo olona izay mihaona amiko androany
…mpamahana bolongana Jamaikana Geoffrey Philp kosa namoaka ny iray tamin'ireo tononkalony, “Ny Tiako Adalakeliko” sy ny Vehivavy ka manome toro-hevitra vitsivitsy ho an'ireo izay mikasa hitory fitiavana androany no tanjona.
Mpamaham-bolongana Barbadiana Skip to Malou indray niaiky fa karazana fety toy ny noely ny “Andron'ny Mpifankatia” aminy:
Miteraka karazana fientanam-po izany ka ho solon’ ny fanomezana, dia aborako amin'ny olona anankiray izay ny ato am-poko na ny fijeriko azy; mahafinaritra foana ny mahatsiaro ny haben'ny fitiavan'olona anao sy ny fikolokoloany anao. Namana, fianakaviana, biby fiompy sy ireo mpifankatia rehetra samy hahazo anjara mofomamim-pitiavana avokoa.
Ny mpiray tanindrazana aminy, Pastel Pink Paisley, namoaka fomba fiteny izay heveriny fa “mahalaza ny dikany rehetra”, nampiany hoe:
Ho feno karazam-pitiavana avy amin'ny karazan'olona anie ny andronao! Xox
Ao Haiti, Livesay Weblog nanova ny resaka fitiavana romantika ho amina karazana fitiavana amin'ny ankapobeny- fitiavana ara-panahy:
TSY mety amin'ny tokatranonay ny mampiasa labozia romantika raha hihinambary sy tsaramaso sakafo hariva. Tsy manam-potoana hitadiavana mofomamy ho an'ireo zanakay koa izahay. Mitaky fotoana BE noho ny fitohanan'ny fiara ny fitadiavana izay mety ho voninkazo. Amin'ny teny frantsay avokoa ny ankamaroan'ny karatra firarian-tsoa aty amin'ny faritra misy anay, teny izay sady tsy fiteninay no tsy vakianay…tsy misy dikany avokoa izany rehetra izany satria raha misafidy hifantoka amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika sy ny fitiavana ny tokantranontsika NOHO NY zavatra tsy misy dikany manakorontana antsika- dia ho toy ny andro fankalazana ny androntsika isan'andro.
Mazava loatra, mpamahana bolongany sasantsasany no manao zavatra amin'ny “tsy Andron'ny Mpifankatia”, raha manamarika ny hafa, tahaka an'i Guyana-Gyal, nanamarika fa “entam-barotra avokoa ny zava-drehetra ankehitriny. Na dia ny fitiavana aza”:
Ny alina farany teo, manelingelina ahy tahaka ny gropy mandeha amin'ny alina ny dokambarotra momba ny ny fetin'ny mpifankatia miseho amin'ny fahitalavitra. Mitady hazavana amin'ny fomba tokana ny olona rehetra kanefa mitabataba raha toa ka fahafinaretana no tadiavina
Inona no nitranga tamin'ny fitsangatsanganana taloha ao anatin'ny tsinam-bolana, mifampi-tanana, maneho firarian-tsoa amin'ny alalan'ny kintana mandalo?
Ao Kiobà, ahitana endriny hafa ny fankalazana ny teny hoe fitiavana, Translating Cuba , Rebeca Monzo nanoratra:
Mitoetra ny marina fa raha velona, indrindra raha mitia, no manome hery antsika handresy ny zava-tsarotra maro dia maro tokoa, ary samy mankalaza azy amin'ny fombantsika tsirairay avy isika sy amin'ny andro hafa koa.
Androany, nitsofoka tao amin'ny hotely fisakafoanana La Casa aho mba hanao fanadihadiana ka mirana ery raha indro fa nahazo fanomezana manokana noho ny andron'ny mpifankatia: sakafo 25.00 CUC isan'olona, tafiditra amin'izany ny “sakafo maivana fiarahabana”, sakafo fanokafam-bavony trondro nosesehina voankazo sy herotra (crème), karepoka, ceviche, vomanga frity, orana sy krevety nasiana tongolo gasy sy tongolo be…
Marina fa vitsy ny olona mahatakatra ny vidin'izany sakafo izany, saingy inoako fa misy tolotra hafa ho an'ny tsy dia manam-bola koa ao. Ny zava-dehibe amin'izany, dia misy ny safidy, ary indrindra ny zo hisafidy izay tiana. Manao fety araka izay mety aminao…ny lehibe indrindra, tsy misy isalasalana, dia ianao sy ny sakaizanao mandany ny andro atoandro na ny alina ho fahatsiarovana sy fankalazana ny fisian'ny andron'ny mpifankatia amin'izao fientanam-po mahafinaritra antsointsika rehetra hoe fitiavana izao.
Tratry ny Fetin'ny Mpifankatia!
Hajiantsary nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, “Raozy”, avy amin'i alice_ling, alalana an Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) Creative Commons license. Tsidiho ny alice_ling's flickr photostream.